Taranta Turkiga | November 2019
Ugu Weyn Ee Taranta Turkiga
Shuruudaha koritaanka poults turkey ee kiniisad
Maanta, taranta taranka ee guryaha gaarka loo leeyahay waa caadi. Qodobkani waxaan ku sharrixi doonaa sida ukumaha ukumaha ah ee guriga looga hortago iyo sharciyada waa in la raaco. Xulashada iyo kaydinta ukumaha Doorashada ukumaha waa mid ka mid ah marxaladaha muhiimka ah ee taranka ee poults. Ukumaha Turkiga waa mid cad ama midab madow, kaas oo lagu badhxo lakabyo yaryar.
Sidee loo beeraa poults turkey ee ku-naqshadeeye
Nidaamka geedi-socodka taranka ee kobcinta maskaxdu waa shaqo leh nidaam gaar ah, taas oo caanaha caafimaadka leh iyo ta caafimaad qabta u yimaadaan dunidan. Xulashada Beeraha Beeraleyda-digaaga ayaa muddo dheer qeexay xaqiiqda ah in ay si wanaagsan u dhasheen ukumaha turkika ah, lakabyo badan ayaa u muuqda (boqolkiiba boqol) marka la barbardhigo dabiiciga dabiiciga ah ee haweenka (inta badan turkiga qayb ka mid ah cirifka ayaa lagu burburiyaa miisaankooda).
Turjubaan iyo turkey turki ah
Si aad u hayso turkiga ma ahan mid adag oo faa'iido leh: hilibka cuntada waa had iyo jeer qiimaha, miisaanka baqtigu wuxuu ka badan yahay, tusaale ahaan, digaaga iyo xitaa guga. Ku saabsan miisaanka turkika oo kuu sheegi doona maqaalkan: waxa ay ku xiran tahay iyo sababta ay shimbir ugaga helin qiyaasta la rabo. Maxaa culeyskoodu yahay miisaankeena Waxaan ka fikirnaa sababaha saameyn kara miisaanka shimbirta: dabaqa - dhedigga ayaa inta badan miisaankoodu yahay shan kiilo garaam ka yar ragga; jinsiga - shimbiraha way ku kala duwan yihiin cabbirka, dhismaha jirka; Da'da - ku habboon hilibka waa 5-6 bilood.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Taranta Turkiga 2019